စည်းကြပ်မှု လွတ်ကင်းငွေများကို အခွန်သက်သာခွင့် ပေးရာတွင် ပြည်ပမှ ငွေမည်းများကို သတိပြုရန် ?? - Yangon Media Group
မတ်လ ၈ ရက်က ကျင်းပသော ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ဆွေးနွေးသူများအနက် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဟောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးသိန်းက စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေသည့်ငွေများကို အခွန်သက်သာခွင့်ပေးရာတွင် ပြည်ပနိုင်ငံမှ ငွေမည်း၊ ဆော်ဒီကဲ့သို့သောနိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည့်ငွေတို့ကို သတိပြုရန် ပြောခဲ့သည်။
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရာတွင် ဆိုးကျိုးအနေဖြင့် အခွန်တိမ်းရှောင်သူများကို မျက်နှာသာပေးသလိုဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း NLD ကိုယ်စားလှယ်က ပြောသည်။ ပြင်ပတွင်ဝေဖန်မှုများရှိသည့် စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေသော ငွေများကို အခွန်သက်သာခွင့်ပေး ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးစိုးသိန်းက ”မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏထက်အမှန် တကယ်လှည့်ပတ်နေသော ငွေသား ပမာဏထက်များပြားနေခြင်း၊ အချို့ သော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားအမည်ခံကာ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ငွေမည်းများကို ငွေဖြူများဖြစ်အောင်လာ ရောက်လုပ်ကိုင်နေခြင်း၊ ဝါဟာဘီ ငွေကြေးအကူအညီများဖြင့် လုပ်ကိုင် နေခြင်း၊ ဝါဟာဘီဆိုတာကတော့ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားမှာရှိတဲ့ ငွေ တွေနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ပိုက်ဆံဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုငွေများရှိနေခြင်း၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှု ရှုထောင့် မှကြည့်ရန်လိုခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း များအပေါ်အခွန်သက်သာမှု လက်ရှိရရှိနေခြင်း”တို့ကို သတိပြုဆောင်ရွက်ရန် ဦးစိုးသိန်းကထပ်လောင်း ပြောသည်။
အခွန်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးခြင်းအပေါ် ဝင်ငွေရလမ်းမဖော် ပြနိုင်သော စည်းကြပ်မှုမှကင်းလွတ် နေသော ဝင်ငွေများကို အခွန်လွတ် ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် သို့မဟုတ်အခွန် သက်သာခွင့်ပေးရာတွင် အဆိုးအ ကောင်းများစွာရှိကြောင်း အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရာတွင်ဆိုးကျိုးအနေ ဖြင့် အခွန်တိမ်းရှောင်သူများကို မျက်နှာသာပေးသလို ဖြစ်သွားနိုင် ကြောင်း NLD ကိုယ်စားလှယ် ဦး အောင်ကျော်ကျော်ဦးက ဆိုသည်။ ”ကောင်းကျိုးတွေကတော့ အခွန်တိုးလာမယ်။ နည်းမှန်လမ်းမှန် နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ရင် အခွန်အခြေ Tax Base ကိုချဲ့နိုင်မယ်။ ငွေကြေး စီးဆင်မှုပိုကောင်းလာမယ်။ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တိုးလာနိုင်မယ်။ ဆိုးကျိုးတွေက တော့အခွန်ယဉ်ကျေးမှု Tax Culture ပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဥပဒေနဲ့အညီ ဝင်ငွေခွန်ပုံမှန်ပေးဆောင်နေတဲ့ အခွန်ထမ်းကြီးများ ဝန်ထမ်းများ အပေါ်မှာ မျှတမှုမရှိဘဲနဲ့ အခွန်တိမ်း ရှောင်သူတွေကို များစွာမျက်နှာသာ ပေးသလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တည် ငြိမ်မှုပျက်ပြားသွားစေနိုင်ပါတယ်”ဟု ဦးအောင်ကျော်ကျော်ဦးက ပြောသည်။
တပ်မတော်သားပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကျော်ဇောက အခွန်ကောက် ဥပဒေပါစည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေသော ငွေများကို အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားခြင်း အားကြိုဆိုရမည်ဖြစ်သော်လည်း ငွေ ကြေးခဝါချမှုများ၊ တရားမဝင်ငွေ မည်းမှငွေဖြူဖြစ်လာမည်ကို သတိ ထားဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ဆိုသည်။ ”ပြည်သူတွေ လက်ခံနိုင်တဲ့ နှုန်းထားနဲ့အခွန်ကို လျှော့ပေါ့။ ကောက်ခံခြင်းအားဖြင့် စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေတဲ့ ငွေဟာနိုင်ငံ တော်ဘဏ္ဍာထဲကို စီးဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကျော်ဇောက ပြောသည်။ ငွေကြေးစီးဝင်မှုများသည့် အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ခြင်းကဏ္ဍတွင် လက်ရှိအခွန်နှုန်းထားမြင့်မား သော်လည်း နိုင်ငံတော်က လက်တွေ့ ရရှိနေသော အခွန်အခမှ နည်းပါး နေပြီးပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ငှားခြင်းများအတွက် သုံးစွဲနေသော ငွေပမာဏများပြားနေကြောင်း ဒုတိယဗိုလ် မှူးကြီးအောင်ကျော်ဇောက သုံး သပ်ပြောသည်။
ထို့အပြင် ၎င်းကဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီ၏အသစ်ဖြည့် စွက်ပြဋ္ဌာန်းချက်အဖြစ်တင်ပြထား သောပုဒ်မ ၃၃၊ ၃၄ တို့မှာ အားနည်းချက်များရှိနေကြောင်း၊ ဘဏ်တွင် ငွေစုဆောင်းသူများ၊ စတော့ဈေးကွက်၌ အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားသူများအနေဖြင့် အစိုးရအပေါ်ယုံ ကြည်မှု လျော့ပါးစေပြီး ဘဏ်လုပ် ငန်း၊ စတော့ဈေးကွက်ကို ကြီးမားစွာထိခိုက်လာနိုင်မည်ကို သတိပြုသင့်ကြောင်း၊ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများကို တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်ဆောင်မှသာ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုသော ပြဋ္ဌာန်းချက်လည်းမဖြစ်သင့်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ ”အမှန်တကယ်ဖြစ်သင့်တာကတော့ အခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေသော ငွေများကိုကောက်ခံမည့် အခွန်နှုန်းဟာ အသက်သာဆုံးဖြစ်သင့်ပြီး နှစ်အလိုက်တိုးမြှင့် ကောက်ခံသွားသင့်ပါတယ်။ စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်း နေသာငွေကို အခွန်သက်သာခွင့်ပေး ပြီးလုပ်ငန်းများ တရားဝင်ဆောင်ရွက် ခွင့်ပေးခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား မခွဲခြားဘဲ ငွေပမာဏအပေါ်မူတည် ပြီးသာ ကောက်ခံသင့်ပါတယ်။ သို့ မှသာငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝသူများကို အခွန်ပိုမိုပေးဆောင်စေတာဖြစ်လို့တရားမျှတစေပါတယ်”ဟု ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကျော် ဇောကပြောသည်။ ဝင်ငွေခွန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ယခင်နှစ်က လစာဝင်ငွေတစ်နှစ်ကျပ် ၄၈ သိန်း ရရှိပါက ဝင်ငွေခွန်ထမ်း ဆောင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ယခုတစ် နှစ်ကျပ်သိန်း ၆ဝ ဝင်မှသာ အခွန် ထမ်းရန် ပြဋ္ဌာန်းသင့်ကြောင်း ဥပ ဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီက သ ဘောထားပြုထားသည်။
ယင်းအပေါ်ကိုလည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးသိန်းက”တစ်ဖက်မှစဉ်းစားသင့်သည်မှာ နိုင်ငံသားပီပီနိုင်ငံ့တာဝန်ကို ခွဲဝေယူတတ်သည့် စိတ်ဓာတ်မြင့်မားလာစေရေး၊ အခွန်ပေးဆောင်သည့် ယဉ်ကျေးမှုကိုတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် စည်းရုံးဆောင်ရွက်နေချိန် မှာ သန်းပေါင်းများစွာသော ဝန်ထမ်းတို့၏အခွန်ယဉ်ကျေးမှု ရေချိန်လျော့ပါးသွားနိုင်သလို နိုင်ငံတော်အ တွက်ရရှိမယ့် များပြားလှသော အခွန်ပမာဏအတွက်လည်း လျော့နည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိအတိုင်းဆက်လက်အခွန် ထမ်းဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်။ ရှိပြီးသား Tax Base ကို မကျဉ်းသင့်ပါဘူး”ဟု ဦးစိုးသိန်းကပြောသည်။ အခွန်ကောက်ဥပဒေကြမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်စားလှယ် ၂၉ ဦး ကဆွေးနွေးခဲ့ကာ သက်ဆိုင်ရာပြည် ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း ဥပဒေ ကြမ်းတစ်ရပ်လုံးကို အတည်ပြုခြင်းကို လာမည့်အစည်းအဝေးများတွင် ဆောင်ရွက်မည်ဟု လွှတ်တော်နာယကမှ ကြေညာခဲ့သည်။
မြန်မာပလာဇာရှေ့တွင် အငှားယာဉ်တစ်စီး မီးလောင်
တစ်နိုင်ငံလုံး အထိတ်တလန့် အံ့သြဒေါသ ထွက်နေသည့်ကြားက ထရန့်က ၎င်း၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ပေါ်လစီကိ??
ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဇုန်နယ်မြေအတွင်း ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးခနှုန်းထားမျာ??
ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဖိုရမ် မန္တလေး၌ ကျင်းပ